खेलाडीहरुले देशको इजत, प्रतिष्ठा र शान बढाएका छन्- मुख्यमन्त्री राई — Himali Sanchar
२०७७ साउन १, बिहिवार
प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले खेलकुद क्षेत्रलाई प्रदेश १ सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । खेलकुद क्षेत्र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढेको छ, मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो ‘हामीले प्रदेशमा खेलकुद क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं ।’ तेह्रौ दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) मा पदक विजेता प्रदेश नं. १ का खेलाडीहरुको सम्मानमा प्रदेश सरकार प्रदेश नं. १ को तर्फबाट आयोजना गरिएको खेलाडी सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन् ।
खेलाडी देशको इजत, प्रतिष्ठा र शान बढाएको मुख्यमन्त्री राईले बताए । मन्त्री राईले साग प्रतियोगितमा प्रदेश १ को तर्फबाट विजेता खेलाडीहरुले देशको साथै प्रदेशको शान बढाएको बताए । प्रदेश १ लाई खेलकुद क्षेत्रको राजधानी बनाउने सङ्कल्प प्रदेश सरकारले लिएको बताएका छन् । मन्त्री राईले ‘खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटहरु विनियोजन गरिएको छ ।’ खेलाडीहरुलाई व्यवसायीक ढङ्गबाट अगाडि बढ्न समेत आग्रह समेत गरेका थिए । ‘तपाईंहरुप्रति सरकारले ठूलो आशा, भरोसा राखेको छ, खेलकुद क्षेत्र अब छाँयामा पर्देन’ मुख्यमन्त्री राई । खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिकरण गर्नु नुहुने मन्त्री राईको धारणा थियो ।
यसैबीच कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले खेलकुदलाई पेशाको रुपमा लिनु पर्ने धारणा राखेका थिए । साग पदक विजेता खेलाडीहरुका कारण प्रदेश सरकार गौरवान्वित भएको भन्दै मन्त्री घिमिरेले खेलकुदलाई जिविको पार्जनको माध्यम रुपमा समेत लिनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले साग प्रतियोगितामा पदक विजेता प्रदेश १ का खेलाडीहरुलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा अनुरुप आज प्रदेश सरकारले खेलाडीहरुलाई सम्मान गरेको हो । पदक विजेता खेलाडीहरुको बैङ्क खातामै नगद पुरस्कार जम्मा गरिदिएको प्रदेश सरकारले आज उपलब्ध खेलाडीहरुलाई सम्मानसमेत गरेको हो । सागमा प्रदेश १ का ९८ जनाले पदक प्राप्त गरेका थिए ।
कतिपय खेलाडीहरु विभिन्न विधामा पदक प्राप्त गर्दा दोहोरिएका कारण ८८ जना खेलाडीहरुलाई प्रदेश सरकारले पुरस्कारसहित सम्मान गरेको हो । पदक प्राप्त खेलाडीहरुलाई ८० लाख नगद उनिहरुकोे खातामा जम्मा गरिदिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मान र पुरस्कार प्राप्त गरेपछि खेलाडीहरुले प्रदेश सरकारले गरेको सम्मानबाट हौसला बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।